के तपाईलाई थाहा छ, आइफोनमा मानिसको शरिरमा भन्दा २.५ गुणा वढि खनिजतत्व !! कुन, कुन छ त ? « गोर्खाली खबर डटकम
एजेन्सी, २९ चैत्र । पिरियोडिक टेवलमा कुल ११८ प्रकारका खनिज छ । तर हाम्रो शरीरमा जम्मा ३० किसिमका खनिज हुन्छन् । जवकी एक आइफोनमा ७५ प्रकारका खनिज तत्व पाइन्छ । उक्त खनिज हाम्रो शरिरमा भएको खनिज भन्दा २.५ गुणा वढी हो । हाम्रो शरिरमा जुन खनिज हुन्छन्, ति सवै दोश्रो पटक उपयोग गर्न सकिन्छ अथवा ति रिन्यूएवल हुन्छन् । हामी यहाँ आईफोनमा कुन कुन महत्वपूर्ण खनिजतत्व हुन्छ त्यसको वारेमा कुरा गर्नेछौं ।